Home Wararka Ciidanka Oromada oo mar kale xasuuqay Shacab Soomaali ah
Ciidanka Oromada oo mar kale xasuuqay Shacab Soomaali ah
Wararka nagasoo gudaha gobolka Soomaalida ee Itoobiya ayaa sheegayo inuu dagaal culus ka qarxay gobolka Fafaan gar ahaan degmada tuuloyinka ku dhow degmada Tuliguuleed.
Warka ayaa intaas ku daray in degmada Tuliguuleed maleeyshiyaad Oromada ka oo jeeda ay weerar xoggan ku soo qadeen tuulooyinka Geelboob, Ceelxamar, Walgo, Shilcaslaay iyo Dudajirme oo katirsan degmada Tuliguuleed
Dagaalka ka socday duleedka degmada Tuliguuleed, waxaa ku dhintaay ugu yaraan 5 qof oo Soomaali ahiyo afar kale ayaa dhawaac garaaya kadib markii ay maleeyshiyaadka Oromada weeraren tuuloyinka u dhow degmada Tuliguuleed.
Sidoo kale wararaka ka imaanaya dhulka Soomaalida ayaa shegay in maleeyshiyaadka Oromada caawa ku xasuuqeen dad Soomaali ah duleedka degmada Tuliguuleed iyo waxaa kamid ah.
Ismaamulka Soomaalida ayaa lagu eedeeyay in ayan waxba ka qaban xasuusa soo noq-noqday ee lagu sameeynayo shacabka Soomaaliyeed. Aqoon yahan Faysal Rooble oo ka soo jeeda deegaanka ayaa eeda xasuuqa dusha ka saaray Madaxweyne Mustaf oo u muuqda mid gabay mas’uuliyadii dalka iyo dadka saaryanayd.